Home News Dowladda Kenya oo xaqiijisay in Ururka Al Shabaabv ay sii daayeen Muwaadiniin...
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in Ururka Al Shabaabv ay sii daayeen Muwaadiniin Kenyaan ah oo ay afduub u heysteen
Ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya ayaa sii daayay labo ruux oo Kenyaan ah oo ay soo afduubeen November 22-keedii, waxaana dadkaasi laga soo Afduubtay tuulo hoos timaada degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari.
Maxamed Biriik, Guddoomiyaha Gobolka Waqooyi Bari, ayaa xaqiijiyay sii deynta labada ruux oo xoolo dhaqato ahaa in ay timid ka dib wadahadal dhexmaray Shabaab iyo sidoo kale beesha ay kasoo jeedeen Xoolo dhaqatadda la Afduubtay.
Birik ayaa sheegay in beeraleydu ay si nabadgelyo ah u soo galeen degaanka Khorof Kharar, isagoo xusay in xukuumaddu ay adkeysay ammaanka magaalooyinka xudduudka ah si looga hortago soohdinta xudduudaha in Al-Shabaab kasoo gudbaan.
“Waxaan ku soo shaqeeynay howlgalo badan oo dhinaca ammaanka ah si aan uga hortagno dhacdo la mid ah tan Ilaalinta xadka ayaa si weyn loo xoojiyay” ayuu yiri Birik.
Dadka degaanka ayaa sheegay in xoola-dhaqatada la af-duubtay ka dib markii ay diideen in ay bixiyaan zakawaad.
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland oo weerar iyo toosh kadaba qaatay Golaha Iskaashiga Maamul Goboleedyada
Next articleUrurka Al Shabaab oo sheegtay iney dileen Saraakiil katirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya
Markeeynka oo hakiyay dhamaan howlgaladii ciidan ee soomaaliya oo ka waday...